Yintoni uMgaqo woKhuselo lweDatha ngokuBanzi (GDPR)?
Ummiselo woKhuselo lweDatha Jikelele (i-GDPR) sisigqibo esenzelwe ukukhusela idatha yabemi kwi-European Union (EU). I-GDPR yayilinyathelo leBhunga le-European Union, iPalamente yaseYurophu, kunye neKhomishini yaseYurophu ukubonelela abemi ngenqanaba elikhulu lolawulo lwedatha yabo.
Emva kweminyaka eliqela yokusulungekisa nokuxoxa, lo mmiselo wavunywa ngokusesikweni yiPalamente yaseYurophu ngomhla we-14 ku-Epreli 2016. I-EU emva koko yavumela ithuba leminyaka emibini yotshintsho kwimibutho ukufikelela ekuthobeleni. Ukusukela nge-25 kaMeyi, i-2018, isohlwayo esinzima se-GDPR sakhaba, ukuba sihlawuliswe nakweliphi na ishishini elingahlangabezani nezikhokelo.
Ngubani ochaphazeleka kwi-GDPR?
I-GDPR ineempembelelo ezifikelela kude kubo bonke abemi be-EU kunye namashishini asebenza ngaphakathi kwe-EU, nokuba ithini indawo yokuhlala. Ukuba amashishini anethemba lokubonelela ngempahla okanye ngeenkonzo kubemi be-EU, baya kuba phantsi kwezohlwayo ezibekwe yi-GDPR. Ukongeza, naliphi na ishishini eligcina idatha yobuqu yabemi be-EU linokuthi linoxanduva phantsi kwe-GDPR.
Loluphi uhlobo lwedatha oluwela phantsi kwe-GDPR?
Izithuba zemidiya yoluntu
Ulwazi lonyango lomntu
I-GDPR igubungela naluphi na ulwazi olunokuhlelwa njengeenkcukacha zobuqu okanye ezinokusetyenziselwa ukumisela isazisi sakho. Imvume yomzali iyafuneka ukuqhubekekisa nayiphi na idatha enxulumene nabantwana abaneminyaka eli-16 nangaphantsi.
Ummiselo ucacisa izinto ezichaphazelwe yi-GDPR. Amagama abandakanya ngokukodwa abavavanyi beenkcukacha kunye nabalawuli beenkcukacha. Ithetha ntoni le nto? Ulwazi olugcinwe efini okanye kwindawo eyahlukileyo yomzimba lusephantsi kwezohlwayo. Nokuba ngubani omisele ukuba ulwazi lwakho luya kusetyenziswa kwaye ngubani oyisebenzisayo, izohlwayo zisenokumiselwa ukuba zisetyenziswe gwenxa ukuba zichaphazela idatha yabemi be-EU.
Isohlwayo ngokungathobeli i-GDPR
Amashishini asilelayo ukuthobela i-GDPR axhomekeke kwizohlwayo. Oku kunokuthetha izinto ezahlukeneyo kumashishini, kuxhomekeke kwinqanaba lokuthintela. Kwisiphelo esiphakamileyo, amashishini anokucelwa ukuba ahlawule ukuya kuthi ga kwiipesenti ezi-4 zengeniso yabo yehlabathi, okanye i-20 yezigidi zeerandi, nayiphi na ephezulu. Iinkampani nazo zinokuhlawuliswa iipesenti ezi-2 ngokungathathi amanyathelo afanelekileyo okugcina iirekhodi zilandelelana. Ekugqibeleni, isohlwayo sixhomekeke kuhlobo lokuthotywa.
Ukophulwa kwedatha kunye ne-GDPR
Ukophula idatha yiyo nayiphi na imeko apho iziko langaphandle lifumana ukufikelela kwidatha yomsebenzisi ngaphandle kwemvume yomntu lowo. Ukuphulwa kwedatha kuhlala kubandakanya ukusetyenziswa gwenxa kwedatha ngokuchasene nabasebenzisi.
Ukuba ulwaphulo lwedatha kufuneka lwenzeke, i-GDPR icacisa ukuba iinkampani kufuneka zibonelele ngokwaneleyo. Inkampani echaphazelekayo ineeyure ezingama-72 zokwazisa iarhente efanelekileyo yokukhusela idatha kwaye kufuneka yazise abantu abachaphazelekayo ngaphandle kokulibaziseka ngokungafanelekanga.
Izopolitiko ezingaqinisekanga kunye ne-GDPR
Kwimeko yezopolitiko engaqinisekanga, iinkampani ezininzi kunye nabemi banenkxalabo malunga nendlela abaya kuchaphazeleka ngayo yi-GDPR ngenxa yobume obungachazwanga be UBrexi . Iinkampani ezisebenza e-United Kingdom ziyakhuthazwa ukuba zithathe amanyathelo okuthobela i-GDPR. Nangona ezi nkampani zingenakho ukuxhomekeka kwi-GDPR, EUGDPR.org URhulumente wase-UK uxele ukuba uzakuphumeza iindlela ezilinganayo okanye ezizezinye zomthetho.
Ukuba uyakholelwa ukuba uza kusebenza e-UK kodwa hayi kwamanye amazwe e-EU, usakhuthazwa ukuba ulungiselele i-GDPR njengoko i-UK kulindeleke ukuba ilandele umthetho ofanayo wokukhusela idatha.
Ngaba inzululwazi iyakholelwa kubaphambukeli
isihlangu sonyawo olophukileyo
Yintoni ubisi lwameva?
Zingaphi ii-reps ekufuneka ndizenzile
yintoni i-dicyclomine emiselweyo
Yintoni amayeza meloxicam